माधव नेपालले कसलाई दिए सांझ परेपछि ५ तारे होटल नछिर्न र रक्सी नखान निर्देशन ? — Sanchar Kendra
माधव नेपालले कसलाई दिए सांझ परेपछि ५ तारे होटल नछिर्न र रक्सी नखान निर्देशन ?
काठमाडाैं । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गाउँ-गाउँमा मिटर ब्याज लगानीले जनता पीडित बनेको बताएका छन्।
उनले यसका विरूद्धमा ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको बताएका छन्। नेपालले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका मान्छेले गाउँका जनता लुट्न मिटरब्याज लगानी गरेको बताए।
समाजवादी पार्टीको प्रेस संगठन घोषणा सभामा शनिबार बोल्दै नेपालले भने, ‘प्रहरीका मान्छे पनि जोडिएको सुनेको छु, मैले अस्ति प्रहरी प्रमुखलाई भनेको छु। प्रशासनको मान्छे पनि जोडिएका छन्।’
नेपालले मिटरब्याजकै कारण सर्लाहीमा मानिसको हत्यासमेत भएको थाहा पाएको बताए। ‘मिटरब्याजको आवाज बुलन्द गर्नेको हत्या गरिएको थाहा पाएको छु। त्यसमा मिटरब्याजी संलग्न भएको कुरा आएको छ,’ उनले भने।
नेपालले दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएको १६ लाख बुझाउनु परेको र त्यतिले पनि नपुगेर २३ लाख माग्दै जनतालाई सताइएको बताए। ‘दुई करोडको १६ करोड बुझेको छ। त्यही पनि नपुगेर करौडौं माग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको हरिबिजोग भएको छ। राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न मिडियाको भूमिका छ।’
उनले त्यस्ता प्रवृत्ति र विकृति विसंगतिलाई नांगेझार पार्न पत्रकारलाई अनुरोध गरे। त्यसरी काम गर्दा पैसा दिएर प्रलोभन देखाउन सक्ने भएकाले सचेत हुन पनि अनुरोध गरे।
‘राक्षसको अनुहार राक्षस नै उतारिदिनुस्। राक्षयलाई देउता चित्रण नगर्नु होला, देउतालाई राक्षस नबनाइदिनुस्,’ उनले भने, ‘सत्यमा पुग्नुस् तथ्यको खोजी गर्नुहोस्। त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण केही हुँदैन।’
उनले पत्रकारलाई साँझ पर्नेवित्तिकै पाँच तारे होटल नजान निर्देशन दिए। ‘साँझ पर्न पाएको छैन। जाडो महिनामा साढे ५ बजे गर्मी महिनामा ७ बजे, होटलमा गरमागर्मी चर्काचर्की, गिलास ठोकाठोक हुने गरेको सुनेको छु,’ नेपालले भने, ‘साँझ पर्नेवित्तिकै पाँच तारे होटल नजानुस्। मदिरा नखानुस्, मदिराले व्यक्तित्व अघि बढ्दैन। स्वास्थ्य राम्रो बन्दैन।’
उनले कम्युनिष्ट आदर्शमा विश्वास गर्ने पार्टीले कुरामा होइन व्यवहारमा काम देखाउनुपर्ने र राम्रो संस्कार हुर्काउनु पर्ने बताए। नेपालले अरुको अपमान होइन, सम्मान गर्न सिक्नुपर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
उनले समाजवाद भनेकै भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता, भेदभावको विरोध गर्नु रहेको बताए।